Olee otú mpikota onu Video Files maka Email
Scratching gị isi ịchọta a doable omume na-mpikota onu video maka email mgbakwunye? Na ị bụghị naanị ya. Ebe ọ bụ na ọtụtụ email usoro ohere nanị maka mmachi faịlụ eziga, ị nwere ike na-agụnye nnukwu video ọma ọbụna mgbe eke a zip faịlụ maka ya. Ya mere, olee iji dozie nsogbu a? N'eziokwu, i nwere ike iji a video Compressor maka email dị ka Wondershare Video Ntụgharị. Na ya, ị nwere ike mpikota onu a nnukwu video faịlụ rụọ ọrụ nke ọma ole na ole nzọụkwụ. Ọ dịghị hassle. N'okpuru ebe m ga-akọwa otú ime nke a n'ụzọ zuru ezu.
Best Video Compressor maka Windows / Mac (Yosemite gụnyere)
Mfe mpikota onu iche iche iche iche nke videos gụnyere MOV, MP4, AVI, WMV na ndị ọzọ.
Enyere gị aka mfe ịgbanwe bitrate, mkpebi na etiti ọnụego.
Akuku, jikota, bugharia na gbawara n'etiti n'ime usoro ihe omume.
Rụchaa akakabarede usoro na sekọnd ole na ole.
1. Tinye gị video faịlụ
Pịa "Tinye Files" bọtịnụ chọta gị isi iyi videos. Ọzọkwa, ị pụrụ ịdọrọ na dobe faịlụ direclty ka isi window. Nke a na usoro-akwado compressing multiple videos maka email, otú i nwere ike mbubata ọtụtụ faịlụ ọnụ site na-ejide ala "Ctrl" button on keyboard. Mgbe faịlụ niile egosipụta dị ka thumbnails ke item tree, ị pụrụ ime ndokwa faịlụ iji, ịgbanwe mmepụta faịlụ aha, wdg
2. Họrọ "Obere Size" ke mmepụta window
Pịa na format oyiyi na n'akụkụ aka nri nke isi window na họrọ a video format na ndọpụta ndepụta dị ka mmepụta. Mgbe ị họrọ a mmepụta format, pịa ala n'aka nri Isetịpụ icon ka ịnweta Setting window. Na window na-egosi, nne Mmetụta "Obere Size" checkbox.
Atụmatụ: Ọ bụrụ na e nweghị usoro nke ọ bụla nchegbu, ị nwere ike tọghata gị video ndị ọzọ na-ewu ewu usoro dị FLV, M4V, MP4, wdg nke na-emekarị sụgharịa nta size faịlụ.
I nwekwara ike iji aka hazie parameters maka bit ọnụego, etiti ọnụego, mkpebi, wdg na ntọala window iji nweta ọ bụla mma ị chọrọ. Mgbe ị na-mwube nnọọ ala parameters, ọ ga-ike dị nta size faịlụ, kamakwa ala video mma. Ya mere na-agba nke a n'uche ma na-agbalị otutu ugboro iji nweta ihe kasị mma mmetụta dabeere nabatara faịlụ size.
3. Malite mpikota onu gị video kpaliri
Mgbe ị na-satisifed na N'ihi ya, suru tọghata iji rụọ ọrụ mkpakọ ozugbo. A mmemme ukwuu oru oma na mkpakọ, na i nwere ike ego pasent na fọdụrụ na ọganihu mmanya.
Mgbe compressions zuru oke, ị nwere ike pịa "Open nchekwa" na-compresed faịlụ ngwa ngwa, wee itinye ya na email izipu enyi gị nnọọ anya.
Video nkuzi: Olee otú mpikota onu video faịlụ maka Email
Olee otú SPLIT Audio Files
Olee otú Email Pictures dị ka a ngosi mmịfe
Olee otú dezie Sony 4K Video
Top 10 Ngwaọrụ na Tinye Music ka Videos Online
Olee otú Download 60 nkeji Video na a Click
VOB Player: Olee otú Play VOB Files
Olee otú Download 8tracks Music
Olee otú dezie DAT Video Files
> Resource> Video> Olee mpikota onu Video Files maka Email